पुरुष हिंसा अन्त गर भन्दै काठमाडौंमा आन्दोलन ! – Annapurna Post News
June 3, 2022 sujaLeaveaComment on पुरुष हिंसा अन्त गर भन्दै काठमाडौंमा आन्दोलन !
काठमाडौं । महिला हिंसाको विरोधमा धेरै प्रदर्शन हुँदै आएको छ । तर, शुक्रबार माइतीघरमा फरक किसिमको प्रदर्शन भएको छ ।प्रदर्शनकारीले पुरुष हिंसाको विरोध गरे । उनीहरुले ‘पुरुष हिंसा अन्त गर १’ ‘पुरुष अधिकार सुनिश्चित गर १’ भन्दै नारावाजी गरे ।
प्रदर्शनकारीले कलाकार पल शाहको पक्षमा नारावाजी गरेका थिए । उनीहरुले पल शाहमाथि अन्याय भएको दाबी गरेर नारावाजी गरेका थिए ।अदालतमा भ्रष्टाचार भएको आरोप समेत लगाए । प्रदर्शनमा अधिकांश महिला नै थिए ।नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा पल शाह थुनामा छन् । उनले थुनाबाहिर रहेर अभियोगको सामना गर्नपाउनुपर्ने माग गर्दै दिएको निवेदन उच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएको छ ।
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी फेरि मतदाता दर्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउने भएको छ । बढीमा १ महिनासम्म नयाँ मतदाताको नाम दर्ता गर्न सकिने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताएका छन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएको दिनदेखि नाम दर्ता गर्ने काम रोकेर मतदाता नामावली प्रशोधनको काम सुरु गर्ने र सो काम सहित समग्र निर्वाचनको तयारीको काम गर्न आयोगलाई १ सय २० दिन समय लाग्ने उनले बताए । २०७९ वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष माथिका १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेका छन् ।
सुष्मा अधिकारीको मादक पोजले तहल्का (तस्बिरहरू)
विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउने भए यि ४० नेपाली कलाकारले , नाम सहित हेर्नुहोश,
June 15, 2022 June 15, 2022 suja